I-iPhone kwiFlickr: Iifoto ezingaphezu kwe-15,000 kunye nokunyuka | Martech Zone
I-iPhone kwiFlickr: Iifoto ezingaphezu kwe-15,000 kunye nokunyuka
NgoMgqibelo, ngoJuni 30, 2007 NgeCawa, Agasti 23, 2009 Douglas Karr
Ngayo yonke i-hype ye-iPhone (andiyifumani), bendicinga ukuba kunganomdla ukubona umsebenzi kwiFlickr kwaye bangaphi abantu ababeka iifoto malunga ne-iPhone okanye i-iPhone yabo. Ndothuswa kukubona ngaphezulu kwe-15,000 yeefoto zamva nje ze-iPhone ezithunyelwe kwiFlickr!
Kubafundi bam be-RSS, cofa ukuya kwiposti ukubona umboniso wesilayidi:
Iqela leNtengiso leApple lifanele ibhonasi kule!
Ulawulo lweMveliso: Ukuthula yimpumelelo edla ngokungahlawulwa
Jul 1, 2007 ngo-9: 28 AM
Andiyithandi iphone. Kwaye ayikafumaneki, okwangoku (kwindawo endihlala kuyo - okungenani ezinye iinyanga ezi-6-9)…
Jul 1, 2007 ngo-10: 43 AM
Ndicinga ukuba i-Apple igqwesile ekuqhubeni abantu ngentengiso yabo. Apho iinkampani ezininzi zigxile kwimveliso kunye nembuyekezo kutyalo-mali, i-Apple igxile 'kupholile'. Bagxila 'kwimfuno' ngokuchasene 'nezidingo', ngokuchasene nesiqhelo.
Oko kuthethiweyo, i-Apple inembali ende kakhulu yokwenza izinto 'zisebenze' okokuqala ngqa kunye nokuqhuba izinto ezintsha kwiimveliso zabo. ndiyenzile yahlekisa kumatshini we-Apple thule kancinci.
Xa ndijonga emva, nangona... ngoku ndine-AppleTV (endiyibukela njengesiqhelo i-TV), iMacBookPro, kunye ne-G3 (idinga uncedo) kunye ne-G4 (ikwafuna uncedo). Kwiminyaka emibini edlulileyo, bendingenayo kwanto iApple!
Andicwangcisanga ngokufumana iphone kungekudala. Bubunewunewu nje endingenakubufikelela ngoku. Ngoku... ukuba umqeshi wam ufuna ukuyitshintsha loo nto…. 🙂
NgoJulayi 1, 2007 ngo-4:10 PM
?kwaye into engaqhelekanga (esandimangazayo nasemva kweminyaka emininzi yeekhompyuter) kukuba i-iPhone inamandla okuqhubela phambili ngakumbi kune-G3. (Sithetha ngantoni, wazifumana njani izandla zakho kwi-G3 kwiminyaka emibini edlulileyo?)
Ndingathanda kwakhona ukuba i-Apple ingaphezulu "kupholile". Ewe, benza izixhobo ezipholileyo, kodwa undoqo kum "uyasebenza". Azihambelani njengeePC, kodwa ke ufumana into esebenza ngaphandle kwebhokisi. Awuzukufumana iiparamitha ezininzi onokuthi uzilungise. Mhlawumbi umntu unokuthi: UMicrosoft ukholelwa ekuvumeleni umsebenzisi abe neendlela ezininzi zokukhetha. UApple ukholelwa ukuba uninzi lwabasebenzisi bazi kancinci malunga nobomi bangaphakathi beekhompyuter, kwaye ke iinjineli zeApple zikwenzela ukhetho.
Kwimisebenzi ethile iMac ingcono, kwabanye yiPC. Ngethamsanqa, imigca iye yamfiliba kade.
Zombini i-KIA kunye neMercedes zikufumana ukusuka ku-A ukuya ku-B. Yinto entle ngakumbi kwenye…
Jul 2, 2007 ngo-8: 15 AM
Ubeke kakuhle! (Ndisandula ukufumana i-G3 kunye ne-G4 – libali elide, kodwa zombini zifuna umsebenzi omninzi ukuze ndibuyele kwisimo… kwaye ndifuna iimonitha, iikhibhodi, njl. )
Jul 2, 2007 ngo-5: 20 AM
Ewe, i-Apple yenza izinto "zipholile" ngokuchaseneyo nomzekelo we-IBM/Lenovo Thinkpads, ethi "ukusebenza", kwaye "umsebenzi" wahluke kakhulu "kupholile" 🙂
Jul 2, 2007 ngo-6: 52 AM
?okuphinda kuxhomekeke kumgca wakho womsebenzi 😉
(Ndicinga ukuba yile nto kanye iphulo le-Apple lidlala kuyo ...)
Jul 2, 2007 ngo-8: 20 AM
Bendinayo i-Thinkpad kwakudala kwaye ibintle. Yayisisitena, kodwa ndandineeNkqubo zokuSebenza ezi-3 kuyo (Windows 2000, Win 98, kunye ne-OS/2). Iinkumbulo ezimnandi. NdineMacBookPro ngoku kwaye yeyona laptop ibalaseleyo ndakha ndanayo-nangona ndaye ndadimazeka ukuba ndiyibeke evenkileni iintsuku ezimbalwa. (I-Apple yajika ngokukhawuleza kakhulu - ndachukumiseka).
NgoJulayi 5, 2007 ngo-4:43 PM
yho! yimifanekiso heck eninzi O_O